Mbeki talks tough with Mugabe over political stalemate in Zimbabwe - Thaindian News
Johannesburg , Aug 17 (ANI): South African President Thabo Mbeki called for an immediate settlement between Zimbabwe ‘’s political rivals to find a way to end the country’’s political crisis.
Mbeki while appealing for an immediate settlement between Zimbabwe ‘’s leaders said that it was necessary to put Zimbabwe on the right road in order to extricate the masses of the people from the dire straits in which they find themselves.
On the sidelines of a regional free-trade summit in Johannesburg Zimbabwe ‘’s political rivals resumed power-sharing talks.
Zimbabwe ‘’s opposition leader, Tsvangirai, met key southern African leaders in Johannesburg on the eve of the summit and briefed Mbeki on talks aimed at forming a transitional unity government in Zimbabwe .
The mounting crisis has cracked the traditional solidarity of African leaders, while Kenya , Liberia and Zambia have condemned Mugabe’’s administration.
Moreover, millions of Zimbabweans have fled the country to escape the world’’s highest inflation rate of 2.2 million per cent, widespread unemployment, and chronic shortages of food and fuel. (ANI)
Tags: arthur mutambara, change leader, democratic change, faction leader, marathon discussions, morgan tsvangirai, opposition leader, political rivals, political stalemate, president robert mugabe, president thabo, presidential elections, presidential vote, regional free trade, robert mugabe, south african president, thabo mbeki, trade summit, unity government, zimbabwe president robert mugabe